ညှို့အားပြင်းလွန်းလှတဲ့ Miley Cyrus ရဲ့ အဝတ်ဗလာနဲ့ ပုံအသစ်။ – SoShwe
Home/Entertainment/ညှို့အားပြင်းလွန်းလှတဲ့ Miley Cyrus ရဲ့ အဝတ်ဗလာနဲ့ ပုံအသစ်။
ညှို့အားပြင်းလွန်းလှတဲ့ Miley Cyrus ရဲ့ အဝတ်ဗလာနဲ့ ပုံအသစ်။
Miley ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က ခွေးလေးနဲ့အတူ ညှို့အားပြင်းလွန်းလှတဲ့ အဝတ်ဗလာနဲ့ပုံအသစ်ကို သူမရဲ့ Instagram အကောင့်မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
Miley တစ်ယောက် သူမရဲ့အားလပ်ရက်တွေမှာ ဓာတ်ပုံအချို့ရိုက်ကူးပြီး Instagram မှာ တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ထိုအထဲမှာမှ ခွေးလေးတစ်ကောင်နဲ့အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ အဝတ်ဗလာနဲ့ပုံလေးဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ခြောက်သွေ့နေတဲ့ သဲပြင်ကြီးမှာ အစိမ်းရောင်ဖိနပ်ရှည်ကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး အဝါနဲ့ လိမ္မော်ရောင်စပ်ထားတဲ့ ဦးထုပ်ကို ဝတ်ဆင်ကာ ခွေးလေးတစ်ကောင်နဲ့အတူ ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး “ Happy National Puppy Day ” လို့ Caption ရေးသားကာ ပို့စ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Miley ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ Miley ကို တွေ့မြင်ရတာ အဆန်းတကြယ် မဟုတ်တော့တာ ကျိန်းသေပေါက်ပါပဲ . . .
Previous ဂျက်စတင်ဘီဘာတစ်ယောက် ကမ္ဘာလှည့်ရှိုးပွဲများမသီဆိုဖြစ်တော့သည့် အကြောင်းရင်း။
Next Lady Gaga ရဲ့ အချစ်သစ်က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ? ? ?